China 80w Led Corn Bulb China Manufacturers & Suppliers & Factory
80w Led Corn Bulb - onye na-emepụta ihe, ụlọ ọrụ, onye na-ebu si China
(Total 24 Ngwaahịa maka 80w Led Corn Bulb)
Bbier 80 Watt Led Corn Bulb na- eji nkà na ụzụ eletrik dị elu, ọkpọka dịpụrụ adịpụ dịpụrụ adịpụ ma na-echekwa nchebe. Anyị 80B Led Corn Bulb enwere ntọala E26 nke dị mfe ịwụnye (dị na nchọta na). Iji weghachite nkwekọrịta ọkụ ọkụ ochie gị na bọmbụ E26 Led Corn Bulb , ị nwere ike ịkwụ ụgwọ obere maka eletriki ma ọ bụ...
10400lm 80W duuru ọka 5000K
10400lm 80W duuru ọka 5000K Bbier 80W butere ọka ọka , igwe anaghị agba ọkụ maka LEDs na ọkwọ ụgbọ ala. Nke a Led Corn bọlbụ oriọna 80W chekwaa ụgwọ ọkụ eletrik 80% site na dochie 250W MH / HPS / HID. Ndụ ndụ LED anyị nke E39 80W Led Bulb Light karịrị awa 50,000, ọkụ ogo ogo 360, akwụkwọ ntụgharị agba dị elu. Na 80w...
butere ọkụ bọta ọka 80W
butere ọkụ bọta ọka 80W Bbier duziri bọlbụ ọka ọkụ , igwe anaghị agba ọkụ dị elu maka LED na ọkwọ ụgbọ ala. Nke a mere ka ọka Oriọna-azọpụta n'elu 80% ụgwọ ọkụ site dochie 250W MH / HPS / zoo. Ndụ ndụ LED anyị nke E39 80W Led Bulb Light karịrị awa 50,000, ọkụ ogo ogo 360, akwụkwọ ntụgharị agba dị elu. 80W Led Corn...
300w LED football Light 130lm / w
Nsonaazụ a dị elu 300w LED bọọlụ Lightlight 130lm / w nwere ọnụ ọgụgụ 65,000lumens. Igwe ọkụ bọọlụ LED 300w 130lm / w dị mma maka ịmịcha nnukwu ama egwuregwu, ebe a na-egwu egwuregwu na ụlọ egwuregwu dịka ụlọ ikpe bọọlụ basketball, ụlọ tennis na ebe egwuregwu bọọlụ. Nnukwu ọkụ bọọlụ LEDw 300w Light 130lm / w bụ IP65...
800W LED High Mast Stadium Light
Esemokwu a dị elu 800W LED High Mast Stadium Light nwere ọnụ ọgụgụ 65,000lumens. Light 800w High Mast Stadium Light dị mma maka ịmịcha nnukwu ama egwuregwu, ebe a na-egwu egwuregwu na ụlọ egwuregwu dịka ụlọ ikpe bọọlụ basketball, ụlọ tennis na ebe egwuregwu bọọlụ. Nnukwu nnukwu ọkụ 800WMast n'Ọdọ Mmiri Lighting...
Light Light Mast Stadium 600W LED
Nnukwu ọkụ a 600W LED High Mast Stadium Light nwere ọnụ ọgụgụ dị 65,000lumens. Light Light 600w High Mast Stadium Light dị mma maka ịmịcha nnukwu ama egwuregwu, ebe a na-egwu egwuregwu na ụlọ egwuregwu dịka ụlọ ikpe bọọlụ basketball, ụlọ tennis na ebe egwuregwu bọọlụ. Nnukwu nnukwu ọkụ ọkụ Light Light Highwwast 600W...
500W LED High Mast Stadium Light
Nnukwu ọkụ a 500W LED High Mast Stadium Light nwere ọnụ ọgụgụ dị 65,000lumens. Light Light 500w High Mast Stadium Light dị mma maka ịmịcha nnukwu ama egwuregwu, ebe a na-egwu egwuregwu na ụlọ egwuregwu dịka ụlọ ikpe bọọlụ basketball, ụlọ tennis na ebe egwuregwu bọọlụ. Nnukwu nnukwu ọkụ ọkụ Light Light Highwwast...
Nsonaazụ a dị elu 300W LED High Mast Stadium Light nwere ọnụ ọgụgụ 65,000lumens. Light 300W LED High Mast Stadium Light dị mma maka ịmịcha nnukwu ámá egwuregwu, ebe egwuregwu na ebe egwuregwu dị ka ụlọ ikpe basketball, ụlọ egwuregwu tennis na ebe egwuregwu bọl. Nnukwu ọkụ 300W Ọpụpụ 300W LED High Mast Stadium Light bụ...
BrightStar 600W Ọpụpụ LED Stadium Light Light
Nsonaazụ a dị elu BrightStar 600W Ọpụpụ LED Stadium Light nwere 65,000lumens. Light 600W BrightStar Ọpụpụ LED Stadium Light Light dị mma maka ịmịcha nnukwu ama egwuregwu, ebe a na-egwu egwuregwu na ụlọ egwuregwu dịka ụlọ ikpe bọọlụ basketball, ụlọ tennis na ebe egwuregwu bọọlụ. Nnukwu ọkụ dị n'èzí 600W BrightStar...
BrightStar 500W Ọpụpụ LED Stadium Light Light
Ọdịdị elu a BrightStar 500W n'èzí LED Stadium Light nwere ọnụ ọgụgụ 65,000lumens. Ejiri ọkụ 500W BrightStar Ọpụpụ Stadiumlọ Egwuregwu Light Stadium dị mma maka ịmịcha nnukwu ama egwuregwu, ebe a na-egwu egwuregwu na ụlọ egwuregwu dịka ụlọ ikpe bọọlụ basketball, ụlọ tennis na ebe egwuregwu bọọlụ. Nnukwu ọkụ dị...
BrightStar 300W Ọpụpụ LED Stadium Light Light
Nsonaazụ a dị elu BrightStar 300W Light Light Stadium Stadium nwere ọnụ ọgụgụ 65,000lumens. Light 300W BrightStar Ọpụpụ LED Stadium Light Light dị mma maka ịmịcha nnukwu ama egwuregwu, ebe a na-egwu egwuregwu na ụlọ egwuregwu dịka ụlọ ikpe bọọlụ basketball, ụlọ tennis na ebe egwuregwu bọọlụ. Nnukwu ọkụ 300W Ọpụpụ...
80w Led Corn Bulb 80W Led Corn Bulb 300w Led Corn Bulb 50W Led Corn Bulb Led Corn Bulb 150W Led Corn Bulb 40w Led Corn Bulb E39 Led Corn Bulbs